Ronald Koeman Oo Xiddigii Ugu Horreeyey U Dhaqaaqay, Laacibiinta Lagu Soo Beddelanayo & Qorshaha Dibu-dhiska Barca Oo Bilaabmay - Gool24.Net
Ronald Koeman Oo Xiddigii Ugu Horreeyey U Dhaqaaqay, Laacibiinta Lagu Soo Beddelanayo & Qorshaha Dibu-dhiska Barca Oo Bilaabmay
Barcelona ayaa qaadday tallaabadii ugu horreysay ee ay dib ugu dhisayso kooxda kaddib xilli ciyaareed dhibaato badan oo laba tababare shaqada laga caydhiyey, walina aanay cidina garan karin ciyaartoyda baxaya iyo kuwa joogaya.
Kooxda reer Catalonia ayaa dib u bilowday wada-xaajoodkii ay kula jirtay Inter Milan oo ay ka doonayso weeraryahanka reer Argentine ee Lautaro Martinez, kuwaas oo istaagay bishii June markii ay ciyaaraha horyaalladu dib uga bilaabmeen waddamada Spain iyo Talyaaniga.
Bishii July, waxa dhacay qodobkii ku xidhnaa burburinta heshiiska Lautaro ee Inter Milan oo ahaa 111 milyan oo Euro, taas oo Barcelona siisay fursad ay kagala xaajoon karto kooxda Talyaaniga in lacag intaas ka hoosaysa lagaga iibiyo, balse Inter Milan ayaa iyadana ay u tahay fursad ay iyadu ku go’aamin karayso qiimaha oo inta ay doonto ay ka dhigi karto.
Wararka ka imanaya waddanka Spain waxa kale oo ay sheegayaan in Barcelona ay suurtogal tahay inay u dhaqaaqdo laacibkii hore ee Manchester United ee haddana hoggaamiya Lyon ee Memphis Depay, kaas oo ay u dhaqaaqi doonaan heshiiskiisa haddii ay ku fashilmaan inay helaan Martinez oo bartilmaameedka koowaad u ah.
Barcelona waxay isku dayi doonaa in heshiis kasta oo ay laacibkan ku doonayso ay ku darto inay qayb ka noqdaan qaar ka mid ah ciyaartoygeeda maadaama dhibaato dhaqaale ay haysato oo deyn badan lagu leeyahay, awoodna aanay u lahayn inay miiska saarto lacag badan waqtigan.
Inter ayaa iyaduna raadinaysay difaaca midig ee Barcelona ee Nelson Semedo oo mar la wariyey inay la gaadhay heshiis shaqsi ah, laakiin ay labada kooxood ku kala kaceen qiimaha laacibkan, taas oo keentay in Nerazzurri ay lasoo saxeexato difaacii Real Madrid ee Achraf Hakimi.
Arturo Vidal iyo Junior Firpo ayaa sidoo kale ku jira ciyaartoyda ay Barcelona qorshaynayso inay u bandhigto Inter Milan, inkasta oo kooxda Talyaanigu aanay doonayn laacibka reer Chile.
Haddii Barcelona ay ku guul-darraysato inay Lautaro kasoo kaxaysato Stadio Guiuseppe Meazza, kaddib waxa liiska soo galaya Depay.
Tababare Ronald Koeman wuxuu aqoon fiican u leeyahay weeraryahanka Lyon ee Depay oo ay ku wada shaqeeyeen xulka qaranka Netherlands, waxaana dhiirigelinta siinaya in lacagta ay kusoo helayaan 26 jirkan ay ugu yaraan kala-badh ka hoosayso inta Lautaro Martinez, kooxda reer France ee Lyon na ay ku qanci karayso 50 milyan oo Euro.
Labada midkii ay heshaba, waxay noqon doonaan xoog cusub oo kusoo kordha Barcelona oo diyaarsanaysa nolosheeda kaddib Luis Suarez.